Natsangan’i Jesosy ny Zanaky ny Mpitondratena Iray | Fiainan’i Jesosy
FANANGANANA NY MATY TAO NAINA
Niala tao Kapernaomy i Jesosy taoriana kelin’ny nanasitranany ny mpanompon’ilay manamboninahitra. Nankany Naina, any amin’ny 32 kilaometatra mahery any atsimoandrefana, izy. Nisy vahoaka be nanaraka azy, ankoatra ny mpianany. Toa efa hariva rehefa nanatona an’ilay tanàna izy ireo. Nifanena tamin’izy ireo ny Jiosy maro be ho any ivelan’ny tanàna mba handevina tovolahy iray.
Ny renin’ilay tovolahy no tena vonton’alahelo. Mpitondratena izy nefa maty koa izao ny zanany lahitokana. Mbola mba nanana an’io zanany malalany io izy rehefa maty ny vadiny. Tsy maintsy ho tena tiany izy io satria andry niankinany sy hany fanantenany. Maty koa anefa izy io. Iza indray àry izao no mba ho namany sy mpikarakara azy?
Tena nalahelo i Jesosy nieritreritra ny nanjo an’ilay vehivavy sy nahita azy vontom-pahoriana. Hoy àry izy taminy: “Aza mitomany intsony.” Tsara fanahy izy nilaza izany nefa tsy nisalasala mihitsy, ka nahazo toky ilay vehivavy. Nanatona an’ilay filanjana faty koa izy ka nikasika an’ilay izy. (Lioka 7:13, 14) Nahagaga be ny zavatra nataony ka nijanona tampoka ireo mpandevina. Maro no tsy maintsy nieritreritra hoe: ‘Inona àry no hataony?’
Ary ireo niara-dia tamin’i Jesosy? Efa nahita azy nanao fahagagana izy ireo, ohatra hoe nanasitrana aretina maro, nefa toa mbola tsy nahita azy nanangana ny maty. Marina fa efa nisy olona natsangana tamin’ny maty taloha ela be. Hahavita izany ve anefa i Jesosy? (1 Mpanjaka 17:17-23; 2 Mpanjaka 4:32-37) Hoy i Jesosy: “Ry tovolahy, hoy aho aminao: Miarena!” (Lioka 7:14) Niarina tokoa ilay tovolahy ary nanomboka niteny. Natolotr’i Jesosy an-dreniny izy ka gaga be ilay reniny sady faly be. Tsy irery intsony izy.
Nidera an’i Jehovah, ilay Mpanome aina, ny olona rehefa nahita fa velona ilay tovolahy. Hoy izy ireo: “Mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika.” Ny hafa kosa nahazo ny antony nanaovan’i Jesosy an’ilay fahagagana ka niteny hoe: “Mitsinjo ny vahoakany Andriamanitra.” (Lioka 7:16) Niely haingana be tany amin’ny tanàna manodidina ny momba an’io fahagagana io. Toa nandre azy io koa ny tao Nazareta tanàna niavian’i Jesosy, izay folo kilaometatra teo ho eo avy tao Naina. Re hatrany Jodia tany atsimo aza ilay vaovao.
Mbola nigadra i Jaona Mpanao Batisa tamin’izay ary tena te hahalala momba ny asa nataon’i Jesosy. Notantarain’ny mpianany taminy àry ny fahagagana nataon’i Jesosy. Nanao ahoana ny fihetsik’i Jaona?
Inona no nitranga rehefa nanatona ny tanànan’i Naina i Jesosy?
Inona no tsapan’i Jesosy rehefa nahita ny alahelon’ilay vehivavy izy, ary inona no nataony?
Nanao ahoana ny fihetsiky ny olona rehefa nahita izay nataon’i Jesosy?
Hizara Hizara Natsangan’i Jesosy Tamin’ny Maty ny Zanakalahin’ny Mpitondratena Iray